High Power 1550nm DFB Fiber Couple Butterfly Laser Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > High Power 1550nm DFB Fiber Couple Butterfly လေဆာ Diode
High Power 1550nm DFB Fiber Couple Butterfly လေဆာ Diode
High Power 1550nm DFB Fiber Coupled Butterfly Laser Diode ကိုအဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောစွမ်းရည်မြင့်အကွာအဝေး optical ဆက်သွယ်ရေးအတွက် optical signal အဖြစ် fiber fiber sensing၊ 3D sensing, gas sensing နှင့် disease diagnosis စသည့် application အသစ်များကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်သွေးကြောစောင့်ကြည့်မှုအဖြစ်။ ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံခြင်းနယ်ပယ်တွင်၎င်းသည်စက်ရုံပိုက်များမှမီသိန်းဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကိုစစ်ဆေးသောဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများအတွက်အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
၁။ High Power 1550nm DFB Fiber Coupe Butterfly Laser Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
1550nm DFB Fiber Coupled Butterfly Laser Diode ကိုအဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောစွမ်းရည်မြင့်အကွာအဝေး optical ဆက်သွယ်ရေးအတွက် optical signal အဖြစ် fiber fiber sensing, 3D sensing, gas sensing နှင့် respiratory ကဲ့သို့ရောဂါရှာဖွေခြင်းစသောအသုံးချမှုအသစ်များကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ နှင့်သွေးကြောစောင့်ကြည့်။ ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံခြင်းနယ်ပယ်တွင်၎င်းသည်စက်ရုံပိုက်များမှမီသိန်းဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကိုစစ်ဆေးသောဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများအတွက်အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
BoxOptronics သည် DFB-LD ကို 1270nm မှ 1610nm မှလှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသော application များတွင်အသုံးပြုသည်။
BoxOptronics DFB-LD module များသည် RoHS ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာသည်။ အဆိုပါ module ကို 14-pin ကိုလိပ်ပြာပုံသဏ္hasာန်ရှိပြီးအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် TEC နှင့် optical output ကိုမော်နီတာများအတွက် PD ပါဝင်သည်။
၂။ High Power 1550nm DFB Fiber Coupled Butterfly Laser Diode ၏နိဒါန်း
3. စွမ်းအားမြင့် 1550nm DFB Fiber Couple Butterfly Laser Diode ၏ထူးခြားချက်များ
optical output ကိုဥပမာ: 1310nm / 40mW, 1550nm / 10mW, 20mW, 100mW, 1653nm;
4. ပါဝါပါဝါ 1550nm DFB Fiber Coupled Butterfly Laser Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
၅။ လျှပ်စစ်ပါဝါ 1550nm DFB Fiber Fiber Couple Butterfly Laser Diode ၏ Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ)
6. Package ပုံဆွဲခြင်းနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) High Power 1550nm DFB Fiber Coupled Butterfly Laser Diode ၏အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ)
7. 1550nm DFB Fiber Coupe Butterfly Laser Diode ၏စွမ်းအားမြင့်မားမှုကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: High Power 1550nm DFB Fiber Coupe Butterfly လေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံထုတ်လုပ်, စျေးပေါ, စျေးနိမ့်, အရည်အသွေး
1550nm DFB Fiber Butterfly လေဆာ Diode ကိုချိတ်ဆက်ထားသည်